Combating tax evasion is laying conducive milieu for tax collection
የግብርና ታክስ አወሳሰን ላይቅሬታ ያለዉ ግብር ከፋይ ቅሬታዉን ማቅረብ እንደምችል የኦሮሚያ ገቢዎች ባለስልጣን አሳወቀ
Ragaa murtee gibiraaf gargaaru haalaan qabachuun gibira haqa qabeessa ta'e murteessuufi
Regular implementation of cash register machine is paving a way for modern tax administration
Hawaasa fedhiin gibiraafi taaksii kaffalu uumuuf manneen barnootaarratti hojjechuun murteessaadha
Hojiiwwan sassaabbii gibiraafi taaksii fooyyessuuf gaheen qooda fudhattootaa olaanaadha
Hirmaattota marii keessaa
Bara kana galii gahumsaan sassaabuuf hanqinoota bara darbeerratti ni xiyyeeffatama
Galiin sadarkaa naannoo Oromiyaatti bara kana sassaabamu saffisa guddinni dinagdee naannichaa dabalaa jiruun akka walitti qabamu taasisuuf Abbaan Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa hoggansa damee godinaaleefi magaalotaa waliin tibbana magaalaa Adaamaatti marii taasiiseera. Barri bajataa kun jalqaba Karoora Guddinaafi Tiraanisfoormeeshinii marsaa lammaffaa ta’uun walqabatee hojiiwwan sadarkaa biyyaafi naannoleetti marsaa jalqabaa keessatti osoo hin raawwatamin hafan dabalatee hojiilee dinagdee fi hawaasummaa bal’aa marsaa Kana keessatti qabaman milkaa’inaan eegaluuf bara kana galii duguuganii sassaabuun murteessaa ta’uu marii kanarratti eerameera.
Guddinni dinagdee naannoo Oromiyaa keessatti galmaa’u guddina akka biyyaatti galmaa’uuf tumsa olaanaa waan godhuuf baasiiwwan guddina kana ittifufsiisuu dandeesisan si’aayinaan walitti qabuun galma biyyi keenya waggoota muraasa booda biyyoota galii giddugaleessa qaban faana hiriiruuf qabattee jirtu darbees imala gara haaromsaatti cee’uuf gochaa jirtu milkeessuuf haal mijataa uuma.
Abaan Taayitaa galiiwwan Oromiyaas yeroodhaa gara yerootti hojimaata fooyya’aa sassaabbii galii si’eessan diriirsuun galii walitti qabuuf karoorfatee ol sassaabuun guddina biyyaa keessatti gahee olaanaa taphachaa jira.
Bara kanas, karoora hiixataa qabachuun hanqinaalee bara darbe raawwii keessatti mul’atan hundeerraa hiikaa ciminoota galmaa’an ammoo sadarkaa olaanaatti itti fufsiisuun galiin sassaabamu harcaatii tokko malee akka walitti qabamuf kallattiin kaa’ameera. Keessattuu sirna bulchiinsa gibiraafi taaksii ammayyaawaa bakka hundatti hojiirra oolee jirurratti hanqinaalee raawwii keessatti mul’atan adda baasuun bara kana haalan irratti hojjechuuf walii galameera.
Hanqinoota bara darbe raawwii keessatti mul’atan keessaas kaffaltoota gibiraa ija tokkoon ilaalanii tajaajila barbaachisaa ta’e kennuurratti sadarkaan isaa wal haa caalu malee bakka hundatti mul’ateera. Sirna bulchiinsa gibiraafi taaksii ammayyaawaa gochuu keessaa dhimmi sadarkaa jalqabaarratti ilaalamuu qabu ragaan kaffalaa gibiraa bifa ammayyaawaa ta’een akka qabamu gochuun hojimaanni murtii gibiraa haqa qabeessa ta’e akka diriiru gochuudha.
Gama kanaanis bara bajataa darbe akkasumas ji’oottan lamaan bara bajataa kanatti hojiin hojjetame gahaa akka hin taane irartti walii galameera. Kaffaltoota gibiraa seeraan maashina gurgurtaa galmeessu bitachuu qaban duguuganii akka bitatan gochuu dhabuu, kaffaltoonni gibiraa sadarkaa “A” n maashina gurgurtaa galmeessu bitachuu malan osoo jiranii sadarkaa “B” n akka bitatan gochuu, kanneen bitachuf dirqama hin qabnerratti ammoo dhiibbaa gochuun akka bitatan taasisuu, kanneen bitatanis hordoffii gahaa taasisuu dhabuun hojiitti akka hin seenne gochuun hudhaawwan marii kanarratti adda bahan keessaati. Bifuma walfakkaatuun, hordoffiin nagaheerratti godhamus kaffaltoota gibiraafi taaksii qixa walfakkaatuun kan keessummeessu osoo hin taane ,loogii kan of keessaa qabuufi seera gibiraafi taaksii bu’uura kan hin godhanne ta’uun bakka hedduutti mul’ateera.
Gibiraafi taaksiin, taaksii alkallattii irraa walitti qabamu galii akka walii galaatti sassaabamu keessaa qooda olaanaa qaba. Bu’uura labsii taaksii dabalata qabeenyaa(VAT) tumameenis naannoleen madda galii kanarraa galii sassaabuuf bakka bu’iinsi kennameeraafi. Galiin taaksii dabalata qabeenyaarraa sadarkaa naannoo Oromiyaatti walitti qabamu guddaa ta’uun hubatamullee rakkoolee garaa garaa kaffalaan gibiraa uumuufi qaamni galii walitti qabu xiyyeeffannaa olaanaa kennuu dhabuun duguugamee galii ta’aa hin jiru. Marii kanarrattis sababoonni galiin taaksii dabalata qabeenyaa duguugamee akka hin sassaabamne taasisan keessaa inni jalqabaa to’annoofi hordoffii gahaa daldaltoota taaksii dabalata qabeenyaaf galmaa’anirratti godhamu daran laafaa ta’uudha. Ragaaleen damee godinaalee Abbaa Taayitaa Galiiwwaniitiin dhiyaatan akka mul’isanitti Kaffaltoonni gibiraa “VAT”iif galmaa’an harki caalaan beeksisa galii ji’a ji’aan dhiyeessanirratti gurgurtaa homaa akka hin raawwanne mul’isu. Kanneen haaraa galmaa’an yoo ta’es baayyeensaanii gara waajjira galii “VAT” galmaa’anii yeroo seeraan taa’e keessatti deemanii sadarkaa irra jiran hin beeksisan.
Qaamni galii sassaabus kaffaltoota gibiraa seeraan “VAT” galmaa’uuf dirqama qaban sakatta’anii galmeesisuurratti hanqinoota hedduu qabu. Kaffaltoonni gibiraa irra jireessi “VAT”iif galmaa’uu qabanis fedhii dhabuurraa kan ka’e qaama galii walitti qabu waliin karaa hin malle hariiroo uumanii yeroon galmaa’uurraa dheessan ni mul’ata. Loogiin gama kanaan qaama galii walitti qabu biratti mul’atus rakkoo hundee gadi fageeffateefi bulchiinsa gaarii mirkaneessuufi tajaajila loogiirra bilisa ta’e kennuurratti hudhaa cimaa galiin mootummaa akka hin guddanne taasisudha.
Sirna bulchiinsa gibiraafi taaksii qindaa’atti gargaaramuun ragaalee kaffaltoota gibiraa bifa ammayyawaa ta’een qabachuun hojimaanni sassaabbii, murtiifi odiitii akkasumas sadarkaa kaffalaan gibiraa yeroon beeksisuufi kaffaluu qaburratti irra jiru beekuuf dandeesisa. Kanaafis, sirna ammayyaawaa kanatti fayyadamuun hordoffiin taasifamu dhimma xiyyeeffannaa olaanaa gaafatuufi sirna bulchiinsa gibiraafi taaksii ammayyaawaa gochuu keessatti dhimma murteessaa akka ta’e irratti walii galameera.
Kuufama galii ilaalchisees sirna ammayyaawaa kanatti dhimma bahuun hanga maallaqa kuufamee jiru, gosa daldalaafi maqaa kaffalaa gibiraatiin adda baafamee si’aayinaan galii mootummaa harca’ee hafe sassaabuurratti hanqinni bal’aan akka jiru tuqameera.
Kanaafis, galii mootummaa baroota hedduuf sababoota garaa garaatiin osoo hin sassaabamin kuufamee jiru yeroo gabaabaa keessatti sirna bulchiinsa gibiraafi taaksii qindaa’aatti gargaaramuun hanga maallaqa kuufamee hafe, baayyina kaffalaa gibiraa kuufamni irra jiruufi dhala hafee jiru addaan baafamee yeroo gabaabaa keessatti sassaabamuu akka qabu kallattiin kaa’ameera. Galii mootummaa dhokatee hafe dabalataan argamsiisuuf hojimaata odiitii ulaagaarratti hundaa’e fayyadamuu dhabuufi kaffaltoota gibiraa galii guddaa qabanirratti xiyyeeffachuu dhabuunis hanqinoota mul’atan yoo ta’u, humna namaa gahumsa qabuufi haqummaan hojjetu gargaaramuu , kaffaltoota gibiraa waliin dhimma galmee odiitii godhamurratti konfiraansii taasisuudhaa eegalee ulaagaalee seeraan taa’an fayyadamuu akkasumas kaffaltoota gibiraa galii guddaa qabanirratti xiyyeeffachuun hojjetamuu akka qabus mari’atameera.
Marii kanarratti Daarektarri Olaanaa Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa Obbo Yohaannis Dinqaayyoo akka jedhanitti hanqinoota bara kana adda baafaman akkasumas rakkoolee walii galaa sassaabbii galii keessatti bakkaa bakkatti mul’atan irratti xiyyeeffannaan hojjechuun galii dinagdeen naannichaa maddisiisu gahumsaan saassaabuuf gahee olaanaa taphata. Keessattuu rakkoolee bulchiinsa gaarii kaffalaa gibiraa saaphana taaksiitti galchuudhaa eegalee sadarkaa sadarkaan mul’atu hundeedhaa hiikuun dhimma murteessaa ta’uu eeruun tajaajila qulqulluu,iftoomina qabuufi loogiirra bilisa ta’e kennuuf gargaara. Sirna gabaa bilisaa keessatti daldaltoonni hundumtuu loogii tokko malee hanga dorgomanii galii argatanirraa mootummaaf gibiraafi taaksii haqa qabeessa akka kaffalaniif daldala seeraan alaa to’achuun dhimma yeroon itti hin laatamne ta’uus tuqaniiru.
Daldaltoonni maashina gurgurtaa bitatan naannoo Oromiyaa keessatti argaman hundumtuu gurgurtaa raawwataniif nagahee karaa ittifufiinsa qabuun akka muran taasisuuf hordoffiin godhamaa ture gadi aanaa ta’uun walqabatee galiin mootummaa dhokataa akka ture kaasuun bara kana rakkoo kana hundeerraa hiikuuf hordoffiin walirraa hin cinne taasifamuu akka qabu hubachiisaniiru. Kaffaltoota gibiraa “VAT” galmaa’uuf dirqama qabanis loogii tokko malee sakatta’amanii akka galmaa’an gochuu, kanneen galmaa’anii galiisaanii hin beeksifne ammoo hordofuun akka beeksisan gochuunis dhimma yeroo gabaabaa keessatti furmaata argachuu qabu akka ta’e kaa’ameera.
Hoggantoonni damee godinaafi magaalotaa akkasumas sadarkaa naannoo maricharratti hirmaatanis karoora hiixataa galii idileefi mana qopheessaa sassaabuuf bara kana qabame galmaan ga’uuf ciminootaafi muuxannoowwan hojii keessatti argatan caalaatti itti fufsiisuu, rakkoolee galiin mootummaa gahumsaan akka hin sassaabamne godhanis kutannoon furuuf rifoormiiwwan gibiraafi taaksii karaa ijaarameen caalmaatti hojiirra oolchuuf waadaa galuusaanii ibsaniiru.